Siinaa - Wikipedia
Siinaa waa jasiirad yar oo isku xirto Afrika iyo aasiya. siinaa waxee ka tirsanttahay wadanka masar, waxeena u dhaxeesaa Badacas, Gacanka Suweys iyo Gacanka Caqaba, Kor neh waxaa ka xigta Bada Dhexe, geeska neh waxaa laga furay Kanaalka Suweys.
Siinaa egypt asia
Egypt-Asia Sinai Peninsula ama fudud Sinai (hadda sida caadiga ah / saɪnaɪ /) waa jasiirad ku taal Masar, iyo qaybta kaliya ee waddanka ku yaal Aasiya. Waxay ku taallaa Badda Mediterranean iyo Waqooyiga iyo Badda Cas oo koonfurta ah, waxayna tahay buundada dhulka u dhaxaysa Aasiya iyo Afrika. Sinai waxay leedahay dhul dhul ah oo qiyaastii ah 60,000 km2 (23,000 oo feet), iyo dad ah qiyaastii 1,400,000 oo qof. Maamul ahaan, Siini Peninsula waxay u qaybsan tahay laba Gobol: Gobollada Koonfurta Sinai iyo Gobalka Sinai. Saddex ka mid ah guddoomiyaal kale ayaa ka soo jeeda Suez Canal, oo u gudubtay dalal Afrikaan ah: Suez Governorate oo ku taal dhinaca koonfureed Suez Canal, Ismaaciila Gobollada dhexe, iyo Waqooyiga Port Said.
Siini Peninsula waxay qayb ka ahayd Masar oo ka timid Hanjabaadkii Hore ee Masar hore (ilaa 3100 CH). Tani waxay ka duwan tahay waqooyiga, Levant (hadda dhulalka Suuriya, Lubnaan, Jordan, Israel iyo Falastiin), oo si weyn u matala goobta geopolitical location iyo isku dhafka dhaqameed, taariikh ahaan waxay ahayd xuddunta khilaafka Masar iyo kala duwan gobolada Mesopotamia iyo Aasiyada Aasiyada Yar. Waqtiga shaqooyinka ajnabiga ah, Sinai waxay u egtahay Masar inteeda kale, waxay kaloo qabsadeen oo ay xukumeen boqortooyadii ajnabiga, taariikhda dhowaan Boqortooyada Boqortooyada (1517-1867) iyo Boqortooyada Ingiriiska (1882-1956). Israa'iil waxay ku soo duushay oo ay qabsadeen Sinai intii lagu jiray xiisadda Suez (oo loo yaqaano Saddexda Dagaal ee Saddexaad ee sababay isku day duullaan isku duuban oo ay sameeyeen Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Israel) ee 1956, iyo intii lagu jiray Dagaalkii Sixidda Maalinta 1967. 6dii Oktoobar 1973, Masar waxay bilaabeen Yom Kippur War si ay u soo celiso xuduudaha, taas oo ahayd goobta dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada Masar iyo ciidamada Israel. Sannadkii 1982, Heshiiskii Nabadda ee Falastiin-Masar ee 1979, Israel, ayaa laga soo saaray dhammaan Sinai Peninsula, 1989, 1989, maxkamad go'aamiye ah oo lagu xukumay soo noqoshada Taba, dhul-khilaafaad.
Maanta, Sinai waxay noqotay dalxiis dalxiis sababo dabiiciga ah, hodanno hodan ah, iyo taariikhda Kitaabka Qudduuska ah. Israaʼiil waxay teendhooyin ka dhisteen Buurta Siinay oo Yehowah axdi buu iyaga la dhigtay.
Buurta Siinay (Mount Sinai) waa mid ka mid ah goobaha ugu cibaadaysan ee diimaha Ibraahim.
↑ Hibada Madaxfurashada
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Siinaa&oldid=225296"
Last edited on 30 Nofeembar 2021, at 10:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Nofeembar 2021, marka ee eheed 10:37.